Akhriso Waxyaabaha laga filan karo kulanka beri yeelanayaan Baarlamaanka Soomaaliya | kowtharmedia.com
Home ARRIMAHA BULSHADA Akhriso Waxyaabaha laga filan karo kulanka beri yeelanayaan Baarlamaanka Soomaaliya
Akhriso Waxyaabaha laga filan karo kulanka beri yeelanayaan Baarlamaanka Soomaaliya
Mar 30, 2018ARRIMAHA BULSHADA, HORUMARKA DALKA, MAQAALO, WACYIGELIN, WARAR, WARAR KALE
Waxaa la filayaa maalinta berito oo taariikhda ku beegan tahay 31-da bisha Maarso in kulan xasaasi ah xarunta Golaha Shacabka ku yeeshaan Xildhibaanada Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya.
Ajandaha kulanka beri yeelanayaan Xildhibaanada Baarlamaanka ayaa noqonaya sida Gudoomiye kuxigeenka koobaad ee Baarlamaanka shaaciyay ka doodista Mooshinka laga soo gudbiyay Gudoomiyaha Baarlamaanka Maxamed Cusmaan Jawaari.
Kulanka Beri ayaa la filayaa in ay kasoo qeyb galaan Xildhibaanada labada garab u kala qeybsan, waxaana wali la ogeyn in kulanka uu imaan doono Gudoomiyaha mooshinka uu ka yaalo ee Jawaari.
Waxaa jirta cabsi laga qabo in kulanka Baarlamaanka foodo ka bilaabaan Xildhibaanada taageersan Gudoomiyaha Baarlamaanka Jawaari oo tiradooda lagu sheegay ku dhawaad 50-Xildhibaan si mooshinka aan looga doodin.
Kulanka Baarlamaanka ayaa sidoo kale laga cabsi qabaa in Gudoonka Baarlamaanka isku qabsadaan hadii uu kulanka soo xaadiro Gudoomiye Jawaari oo hada aaminsan in mooshinkii laga keenay uu buray uuna yahay Gudoomiyaha Baarlamaanka.
Waxaa sidoo kale kulanka laga filan karaa in Xildhibaanada Mooshinka wada oo tiradooda hada korortay in ay isku raacaan in isla beri cod loo qaado Gudoomiye Jawaari codka kalsoonidana kala laabtaan.
Kulanka Baarlamaanka ee beri ayaa ah mid xamaasad gaar ah leh oo wax waliba laga filan karo, waxaana la adkeeyay amaanka xarunta Baarlamaanka oo la geeyay ciidamo badan oo xaqiijinaya amaanka, waxaana la xiray wadooyin badan oo kuyaala Muqdisho.
Dad Siyaasada Soomaaliya ku xeel dheer ayaa aaminsan hadii meesha laga saaro Gudoomiyaha Baarlamaanka Jawaari ee meesha ka bixi karto kala qeyb sanaanta Baarlamaanka xaalkana uu sidii hore kusoo noqon karo.
Mooshinka laga keenay Gudoomiyaha Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ayaa sababay in ay kala qeyb samaan Xildhibaanada Baarlamaanka, waxaa sidoo kale mooshinkan ku kala qeybsamay Gudoonka Baarlamaanka.
Previous PostMichael Owen oo saadaaliyey kulamada Premier League Next PostWasiir Xoosh “Mooshinka Jawaari 10-ka berri waxay ka bilaabataa maalinta la horgeeyo Golaha”